Aqriso imisa ayaa ku baxday Gacanta Alshabaab oo ay dileen | Somalisan.com
Home Afsomali Aqriso imisa ayaa ku baxday Gacanta Alshabaab oo ay dileen
Aqriso imisa ayaa ku baxday Gacanta Alshabaab oo ay dileen
Al-Shabaab ayaa dhowaan sheegtay inaysan si ulakac ah u beegsan shacabka, hase yeeshee warbixin cusub ayaa shaaca ka qaaday in kooxdan ay gacanteeda ku maqan yihiin muslimiin badan.
In ka badan 4,000 oo qof ayaa ku dhintay weerarada kooxda Al-Shabaab tan iyo sanaddii 2010, sida ku cad xog ay ururisay hay’ad ka shaqeysa keydinta khasaraaha ka dhasha xasaradaha dagaalka oo magaceeda loo soo gaabiyo ACLED (Armed Conflict, Location and Event Data Project).
Dadkan Shabaab ay dishay ayaa badankood, oo ah 3,000 oo ka mid ah, dhintay wixii ka dambeey sanaddii 2015.
Hase yeeshee khasaaraha ayaa ugu badnaa ku dhowaad saddexda sano ee madaxweyne Farmaajo uu xukunka hayey, ayada oo tan iyo bishii March ee 2017, bil kadib markii la doortay Farmaajo, ay dhinteen 2000 oo qof oo shacab ah.
Dhimashada dadkan ayaa isuga jirta kuwa ka dhashay toogashooyin, afduub, weeraro ismiidaamin ah, iyo dhacdooyin kale oo la go’aamiyey inay yihiin “kuwa si toos ah loogu beegsaday shacabka.
Tiradan ayaa waxaan ku jirin dadka ku dhinta dagaallada hubeysan ee u dhaxeeya dowladda iyo Al-Shabaab, iyo weerarada sida tooska ah loogu beegsado ciidamada amniga.
ACLED waxay sheegtay in qiyaastan ay tahay tan ugu hooseysa ee ay sameeyeen.
Tirada rasmiga ah ayaa intan ka badan karta, sida ku cad xogta dhaqaatiirta Soomaaliyeed. Isbitalka ugu weyn Muqdisho ee Medina, ayaa diiwaan geliyey dhaawacyada 54,000 oo qof tan iyo 2007. 75% dadkaas ayaa ah shacab.
Agaasimaha isbitalka, Dr. Maxamed Yuusuf oo la hadlay VOA ayaa sheegay in 20 ilaa 25 ka mid ah 100-kii qof ee isbitalka la keeno ay yihiin dhimasho. Haddii qiyaasta lagu saleeyo xisaabtan, tirada dhimashada ee tan iyo 2007, ayaa noqoneysa 10,000 oo qof oo badankood ay yihiin shacab.
Previous articleMidowga yurub wuxuu si adag uga soo horjeedaa xukunka dilka ah ee maxaabiista ku jira xabsiyada Somaliland
Next articleA Year After Dusitd2 Attack, Grief And Pain Still Linger
Full VIDEO Farmaajo ” Xildhibaano firfircoon darajo fircircoon Mucaarad Xanaaqsan
Somalisan News - February 9, 2019
Aqriso Dakhliga dowladda Soomaaliya soo gala xilligan Xagee lagu xareeyaa oo bank u...
Somalisan News - November 23, 2016
Maamulka Somaliland WAR-SAXAAFADEED: Madaxweyne FARMAAJO